ကျဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည် ကချင် တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီ အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ဖေးမကူညီခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း – Cele Oscar
ကျဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည် ကချင် တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီ အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ဖေးမကူညီခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း
ပရိသတ်ကြီး ရေ.. အသံ ချိုချိုလေး နဲ့ သီချင်း ကောင်းလေးတွေ သီဆို တတ်ပြီး အနုပညာ လောက မှာ ပရိသတ် အချစ်တွေ ကို အခိုင်အမာ ရရှိ ထားသူ ကတော့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း နဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း တို့ရဲ့ ညီမ အငယ်ဆုံးလေး ဖြစ်တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း ကတော့ တော်လှန် ရေး တိုက်ပွဲ အတွင်း လမ်းပေါ် ထွက်လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ခွန်အား အပြည့် နဲ့ အားကြိုး မာန်တတ် ပါဝင် နေသလို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေလည်း အကောင်းဆုံး ပါဝင်နေသူ လည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်း ကတည်းက လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ အားတတ် သရော လုပ်ဆောင် နေတဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း ကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းက ကျဆုံး သွားတဲ့ အသက် (၁၉) နှစ် အရွယ် ကချင် တိုင်းရင်းသားလေး ထီဆန်ဝမ်ဖီ (ခ) ဖီထွန်း အတွက်လည်း အလှူငွေတွေ လှူဒါန်းပြီး ဖေးမ ကူညီခဲ့ပါတယ်..။ “လူညီရင် အရှေ့ထွက် တိုက်လို့ ရပြီ”လို့ ပြောပြီး သိပ်မကြာခင် မှာပဲ ပါးကို ထိမှန် ကျဆုံးသွားတာ ဖြစ်ပြီး တစ်ခြား သူတွေကို ထိမှာ စိုးလို့ သူ့ကို ပစ် သူ့ကို ပစ်ဆိုပြီး ရဲရင့် လှစွာ နဲ့ သူ့အသက်ကို စတေးပြီး အခြား လူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ် ပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းလေး ဖီထွန်း အတွက် ဆွိဝတ်ရည်သောင်း က အလှူ ငွေတွေနဲ့ ဖေးမ ကူညီခဲ့ တာပါ..။
“မောင်လေး Phi Tun အတွက် ကိုယ် တတ်နိုင် သလောက်လေး သွားလုပ် ပေးခဲ့ပါတယ်။ အကူငွေထည့် တာတောင် လက်မခံဘူး ။ သူ့အကို လက်ထဲအတင်းထည့်ပေးခဲ့ရတယ် ။ တစ်ကယ် ရိုးသား လွန်းတဲ့ တိုင်းရင်း သားလေး တွေပါ …. RIP ပါ မောင်လေး Phi Tun ရေ..” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်း စွာ ပြောပြ ထားတာပါ..။ ယူကြုံး မရစွာ နဲ့ ဝမ်းနည်း စကားလေး ပြောရင်း အလှူ ငွေတွေ လှူခဲ့တဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်း ရဲ့ အလှူလေးကို လည်းသာဓု ခေါ်ကာ ကျဆုံး သွားတဲ့သူရဲကောင်းလေး အတွက်လည်း ပရိသတ် တွေက ဆုတောင်း ပေးထား ကြတာ တွေ့ရ ပါတယ်..။
Photo Credit – Sweet Wutt Yi Thaung’s Fb Acc
ပရိသတျကွီး ရေ.. အသံ ခြိုခြိုလေး နဲ့ သီခငျြး ကောငျးလေးတှေ သီဆို တတျပွီး အနုပညာ လောက မှာ ပရိသတျ အခဈြတှေ ကို အခိုငျအမာ ရရှိ ထားသူ ကတော့ နှငျးဝတျရညျသောငျး နဲ့ အေးဝတျရညျသောငျး တို့ရဲ့ ညီမ အငယျဆုံးလေး ဖွဈတဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျး ပဲ ဖွဈပါတယျ..။ ဆှိဝတျရညျသောငျး ကတော့ တျောလှနျ ရေး တိုကျပှဲ အတှငျး လမျးပျေါ ထှကျလှုပျရှားမှု တှမှော ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ ခှနျအား အပွညျ့ နဲ့ အားကွိုး မာနျတတျ ပါဝငျ နသေလို တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနလေညျး အကောငျးဆုံး ပါဝငျနသေူ လညျး ဖွဈပါတယျ..။
ဖဖေျောဝါရီလ အစပိုငျး ကတညျးက လူထု လှုပျရှားမှု တှကေို ကိုယျတိုငျ ကိုယျကြ အားတတျ သရော လုပျဆောငျ နတေဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျး ကတော့ သင်ျဃနျးကြှနျးက ကဆြုံး သှားတဲ့ အသကျ (၁၉) နှဈ အရှယျ ကခငျြ တိုငျးရငျးသားလေး ထီဆနျဝမျဖီ (ခ) ဖီထှနျး အတှကျလညျး အလှူငှတှေေ လှူဒါနျးပွီး ဖေးမ ကူညီခဲ့ပါတယျ..။ “လူညီရငျ အရှထှေ့ကျ တိုကျလို့ ရပွီ”လို့ ပွောပွီး သိပျမကွာခငျ မှာပဲ ပါးကို ထိမှနျ ကဆြုံးသှားတာ ဖွဈပွီး တဈခွား သူတှကေို ထိမှာ စိုးလို့ သူ့ကို ပဈ သူ့ကို ပဈဆိုပွီး ရဲရငျ့ လှစှာ နဲ့ သူ့အသကျကို စတေးပွီး အခွား လူတှကေို အတတျနိုငျဆုံးကာကှယျ ပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနညျ သူရဲကောငျးလေး ဖီထှနျး အတှကျ ဆှိဝတျရညျသောငျး က အလှူ ငှတှေနေဲ့ ဖေးမ ကူညီခဲ့ တာပါ..။
“မောငျလေး Phi Tun အတှကျ ကိုယျ တတျနိုငျ သလောကျလေး သှားလုပျ ပေးခဲ့ပါတယျ။ အကူငှထေညျ့ တာတောငျ လကျမခံဘူး ။ သူ့အကို လကျထဲအတငျးထညျ့ပေးခဲ့ရတယျ ။ တဈကယျ ရိုးသား လှနျးတဲ့ တိုငျးရငျး သားလေး တှပေါ …. RIP ပါ မောငျလေး Phi Tun ရေ..” ဆိုပွီး စိတျမကောငျး စှာ ပွောပွ ထားတာပါ..။ ယူကွုံး မရစှာ နဲ့ ဝမျးနညျး စကားလေး ပွောရငျး အလှူ ငှတှေေ လှူခဲ့တဲ့ ဆှိဝတျရညျသောငျး ရဲ့ အလှူလေးကို လညျးသာဓု ချေါကာ ကဆြုံး သှားတဲ့သူရဲကောငျးလေး အတှကျလညျး ပရိသတျ တှကေ ဆုတောငျး ပေးထား ကွတာ တှရေ့ ပါတယျ..။
ခေါက်ဆွဲကြော်ကျွေးတဲ့ အလှူရှင်တွေကို အန္တရာယ်တွေကြားထဲမှာတောင် သံပြိုင်ဟစ်ကြွေးပြီး ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ GEN Z လူငယ်တို့ရဲ့ ဗီဒီယို
သာကေတမြို့နယ်အတွင်းက အဘိုးအဘွားတွေကို အစားစာတွေလှူဒါန်းပေးနေတဲ့ နေဒွေး….